Online Classified Marketplace Launches In Myanmar | Myanmar Business Today
HomeBusinessOnline Classified Marketplace Launches In Myanmar
Online Classified Marketplace Launches In Myanmar
ရောင်းသူနှင့် ၀ယ်ယူသူများကြား ချိတ်ဆက်၀ယ်ယူနိုင်မည့် အွန်လိုင်း၀က်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည့် MYANMARKT.COMကို ဧပြီလ ၂၃ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
MYANMARKT.COMတွင် ကုန်ပစ္စည်း ၀ယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရောင်းချသူများအနေဖြင့် မိမိ၏ ကုန်ပစ္စည်းကို အခဲ့ရောင်းချနိုင်မည့်အပြင် ၀ယ်ယူသူများမှာလည်း ၀န်ဆောင်ခပေးရန်မလိုဘဲ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် Portal ဘက်မှ မည်သည့် ထုတ်ကုန်မှ ရောင်းချမည်မဟုတ်ခြင်း၊ ကော်မရှင်ကြေးပေးသွင်းရန် မလိုသည့်အပြင် ရောင်းသူနှင့် ၀ယ်ယူသူအကြားတွင်လည်း ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်မတို့ဝက်ဆိုက်ကဝယ်ယူသူတွေကို Free Delivery နဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှာပါ။ ဒါက နှစ်ဘက်စလုံးအတွက်လည်း အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သလို ဒီလို အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကြောင့် ဝယ်သူတွေက ကိုယ်တိုင်လာဝယ်စရာမလိုသလို လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးမယ့် Delivery တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်း ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်လို့ ရောင်းသူ၊ ဝယ်သူနဲ့ သူတို့တွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်း လုံခြုံစိတ်ချနိုင်မှာပါ” ဟု MYANMARKT.COM ၏ Chief Operating Officer ဖြစ်သူ ဒေါ်ကျော့စန္ဒီက ပြောသည်။
၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊ မော်တော်ယာဉ်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တင်ပြထားမည့်ဖြစ်သည့်အတွက် ၀ယ်ယူသူများအနေဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုထဲတွင် အလွယ်တကူရှာဖွေ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါတွင် COVID 10 ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် လုပ်ငန်းများကို ရပ်ဆိုင်းထားရခြင်းကြောင့် ပြည်သူလူထုကလည်း လိုအပ်သည်များကို ရှာဖွေ၀ယ်ယူနိုင်ရန်နှင့် ကုမ္ပဏီများမှ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် MYANMARKT.COM ကို စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“လိုအပ်နေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ရှာဖွေရသလို လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကို ဝယ်ယူဖို့လည်း ရှာဖွေကြရပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေက ဖိနပ်အသစ်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဖုန်းတစ်လုံးလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ကားတစ်စီးလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မတို့က နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ ရောင်းသူ၊ ဝယ်သူတွေကြား အခမဲ့အသုံးပြုလို့ရအောင် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ အွန်လိုင်းဈေးဝယ်တဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုဖွံ့ဖြိုးလာအောင် ကြိုးစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ” ဟု MYANMARKT.COM ၏ Chief Operating Officer ဖြစ်သူ ဒေါ်ကျော့စန္ဒီ က ထပ်မံဖြည့်စွက် ပြောသည်။
ထို့ပြင် MYANMARKT.COM အနေဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ပညာရှင်များ၊ အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ် ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် ဝက်ဆိုက်သုံးစွဲသူများအကြား အခမ်းအနားများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အစဉ်အမြဲ ကူညီပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။
MYANMARKT.COM, the first portal in the country that brings together items, electronics, real estate, cars, jobs, and services under one roof, announced the official launch of its online marketplace in Myanmar on April 23.
The marketplace aims at connecting buyers and sellers throughaclassifieds’ portal where sellers can post for free and buyers can buy without paying commission.
“As Myanmar is growing, so do the needs of people and companies. And we all find ourselves in need to sell items or look for something to buy, whether it isanew pair of shoes,aused cell phone, oracar. That is why we decided to develop an online marketplace specifically for the needs of the country to connect buyers with sellers” Ma Kyawt Sandi, Chief Operating Officer of Myanmarkt.com, said.
As the country deals with the current health crisis from the coronavirus and people are asked to isolate themselves, MYANMARKT.COM steps in to help by offeringaplatform for companies to stay in business and people to continue searching and finding what they are looking for.
“We are very pleased to be able to offer our premium high-quality and free service to companies and consumers during those difficult times. While physical movement may be restricted, our online marketplace offersasuperior and safe way for consumers to find what they are looking for,” Ms Kyawt Sandi said.
Unlike e-commerce stores, MYANMARKT.COM does not have any products to sell, does not charge commission, and does not interfere between buyers and sellers. Instead, it offers an online portal for those having things to sell. The process takes just two minutes and three simple steps: (1) Upload product photos; (2) add product info; and (3) add contact information so that potential buyers can reach out.
Myanmarkt.com has already organizedaluncheon with industry leaders for the telecom, banking, and retail sector to discuss best practices for promoting internships and job opportunities for young professionals.
Previous articlePrudential Myanmar Provides Free Additional Insurance Cover Against COVID-19
Next articleConstruction sites require approval from government